Tag: ad na-eje ozi | Martech Zone
Kpido: ad serving
Ọ nwere ike ịdị ka ajụjụ elementrị mara mma, “Olee otu esi arụ ọrụ mgbasa ozi na weebụsaịtị?” Usoro a dị oke mgbagwoju anya ma na - eme n’oge dị oke egwu. Enwere ndị nkwusa n'ụwa niile na-enye ndị dị mkpa, ndị agbadoro ozi mgbasa ozi na-anwa iru. Mgbe ahụ, a na-enwekwa mgbanwo mgbasa ozi n ’ụwa niile, agbanyeghị, ebe ndị na-akpọsa ngwa ahịa nwere ike ịchọta, gbaa akwụkwọ ma debe mgbasa ozi. Gịnị bụ ihe Ad Server Ad sava bụ usoro
Ọ bụrụ n’inweta saịtị WordPress ma chọọ ijikwa mgbasa ozi maka ndị mgbasa ozi gị, AdButler nwere ike ịbụ nhọrọ kacha mma na ahịa. Njikọ WordPress site na wijetị na-eme ụlọ ma na-etinye mpaghara mgbasa ozi mpempe achicha, yana usoro AdButler bụ nke a na-ahụkarị, na-agbanwe agbanwe, na-agbanwe agbanwe, na-enyekwa whitelabeling. AdButler Platform Atụmatụ Gụnyere: Scalability - - A pụrụ ịdabere na nlele anya ya ka ọchịchọ na-eto, site na narị otu narị na ọtụtụ ijeri echiche. Nkụnye isi isi - AdButler auctions enyere